Eminyakeni yamuva, waphinda vogue ngamathe. Futhi kanye ongakhetha yendabuko abesifazane gqizisa emakhanda ezikhathini komlando, namuhla kungenzeka ukuhlangabezana umbhali nge zezinwele aluka, okuyinto imisebenzi yangempela yobuciko. Nokho, eyodwa kuphela dexterity mathupha futhi umcabango ngokwanele ukwakha isithombe esiphoqayo futhi njengabesifazane. Esimweni ngasinye kubalulekile ukubonisa indlela ngamunye. Ngakho kanjani ukukhetha kwekhanda kwesokudla eluke amagoda?
izinhlobo ebusweni: yiziphi
Njengoba nalapho engomeni odumile, "Mantombazane zihlukile." Nokho, ochwepheshe embonini ubuhle wenza division okunemibandela amaklayenti ku 5 amaqembu ayinhloko: square, ntathu, nxazonke, aboncamane futhi okusaqanda ubuso, ngalinye elikwazi ukulingana "" zezinwele. Ngaphezu kwalokho, kufanele inake izici ezinjalo isakhiwo ebusweni nasekhanda, ubukhulu kanye ukuma kwekhala nezindlebe. Uma ucabangela izinhlobo ubuso kanye zezinwele, okuyinto zivumelana kubo, kumelwe futhi bacabangele yobudala sowesifazana indlela yakhe yokuphila. Phela, amantombazane bephoqeleka ukuba sivuke umsebenzi, neze ngikwazi ukulokhu ukudala yobuciko, nikela isikhathi esiningi.
Zezinwele eluke amagoda ubuso esingunxantathu
Amanye amantombazane unciphise kwesilevu kuhlangene projection ububanzi skulnymi. Lokhu kukunika ubuso babo nokucija ezithile.
Ngakho-ke, umgomo oyinhloko kule ukukhethwa alungise izinwele kufanele Umane emigqeni inguquko phakathi cheekbones futhi kwesilevu. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa namathe, kodwa sifake lapho kuphela Strand engenhla izinwele. Ngokwesibonelo, ungumuntu omuhle - ukwenza Friend, 'bayazibopha' emhlabeni ebunzini. Kunconywa ukuba ngobumnene nekama izinwele esifundeni parietal futhi ngosizo isitayela amathuluzi ukunikeza inani imicu khulula.
ubuso Square: zezinwele eluke amagoda (isithombe)
Kukholakala ukuthi kwesilevu omkhulu kubonisa uhlamvu oqinile womnikazi wayo futhi unikeza isibindi ubuso. Kodwa yini okufanele uyenze ne "imigexo" wobulili bubuhle? Futhi kungenzeka ngosizo izinwele ukuthambisa imigqa yohlobo square lomuntu? Abaklami bathi, yebo, futhi sipho salokhu eluka ukusetshenziswa aluka phezu ihlombe elilodwa, isibonelo, ezifana photo, nge esiphongweni aluhlaza futhi ohlangothini poluproborom etshekile. Kunoma ikuphi it is hhayi Kunconywa ukuba ukuxubha izinwele ebusweni, ukuze ugcizelele massiveness lwesilevu lubonakale kakade.
Yini kwamagoda ezifaneleke ubuso unxande
Kukholakala ukuthi amantombazane nge kwesilevu eside futhi ibe ebunzini okusezingeni eliphezulu empilweni ulinde eziningi ukuhlolwa, okuyizinto, ngenhlanhla, babhekane ngokuphumelelayo. Futhi kugucula isiphetho sabo nge ukukhethwa best of zezinwele ezokwenza ubuso unxande ezibukekayo ngaphezulu.
Ukukhetha uhlobo lomuntu kwamagoda, kumelwe siqale sibone ubude ongakhetha. Ngakho, kulesi simo ukulingana zezinwele curvy ne imicu eside rastaskannymi hhayi ngezansi cheekbones. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukukhulula esiphongweni isigamu-noma ngqo amashiya wakhe.
Ukukhetha scythe for round ubuso
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi inguquko abutshelezi umugqa emhlathini ukuba izihlathi kanye hairline kufanele ibukeke ephelele. Nokho, ezinjalo abantu isiyingi ngokuvamile bantula inkulumo, futhi babheka flat. Ukuze kulungiswe leli ukuntula, ungasebenzisa ongakhetha, kepha efaniswe zezinwele azilingani for square ubuso hlobo. Phawula ukuthi kule ndaba, ubude bawo kumele singeqi 25 cm omuhle -. Wonke kwekhanda, enika ikhanda lakhe umumo oyindilinga ne sokudlondlobala ngesikhathi kwesilevu. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi eluka kwamagoda ngesimo usebe nge encane imicu interweaving ngakolunye uhlangothi kanti ukuvumela esiphongweni ngqo, njengoba kuboniswe esithombeni. Futhi wamukelekile amafutha okusezingeni eliphezulu yokwahluka iDemo poluproborom etshekile. Ngokwesibonelo, ungaqala sifake a eluka French kusukela maphakathi ebunzini emuva komugqa, lapho wayezoba oqondile sokuvalelisa emaphakathi. Esimweni esinjalo, umuntu uyoba zibukeke side futhi babe bazwakale. Okuwukuphela isixwayiso - inetha kumele iphele ngaphambi kokufinyelela okhakhayini, futhi ngokuqinisekile hhayi kunoma isiphi isimo angabuyeli emuva ekhanda lakhe. Uma ucabangela izinhlobo ezahlukene ubuso kanye zezinwele, esimweni esiyindilinga ubuso kufanele sinake ukhetho lapho scythe "evamile" sisiba phezu phezulu usebenzisa izikhonkwane njengoba uhlobo umqhele.
Kwamagoda for girls nge okweqanda ubuso uhlobo
Njengoba ubona, ukukhetha kwekhanda kwesokudla ungakwazi ukufihla amaphutha amaningi ukubukeka. Nokho, kukhona amantombazane ofanelana ongakhetha, futhi akudingeki ukuba babheke namathe ngohlobo ubuso. Phakathi kwabo kukhona umnikazi ujabule ubhekene okusaqanda, okuyiwona kukhethwa zezinwele - kungcono nje indaba ukunambitheka. Kodwa ngisho ngakho ubulili fair ukucabanga kanjani uyobheka azokuthanda eluka izinwele zabo. Phela, okufana efanayo, zingaba zikanokusho abanikazi umhlobiso ikhanda aluhlaza, ezisontekile, futhi sibe nombono unpresentable we mncane imicu ngqo. Ngakho-ke, singaba batusa zezinwele okulandelayo kwamagoda, isithombe ozokusiza ngokushesha kahle amasu yokudalwa:
Ukuze abesifazane nezinwele mncane futhi ongakhetha efanelekayo ngoku-bopha kubo bonke curling kanye ukwelukwa we imicu 4.
Ukuze obukhulu izinwele isudi noma kwamagoda zakudala zaseFrance, kanye "Fishtail".
Uma "mane" yakho akahlukile nobukhazikhazi, umuntu angabona lokuqala ukucubungulwa izinwele mousse ukubanika ivolumu bese tie iribhoni ububanzi ekhanda ukuze esebenzisa emikhawulweni yaso ngemuva umsila ukuqoqa izinwele futhi eluka eluka zakudala, ezifana esithombeni.
Njengoba kufanele a kwekhanda ukuze izici zobuso
Kungakhathaliseki ukuma kobuso intombazane may kube ezithile ifana eside, elincane, elimile noma ekhaleni esinamanzi, ngokweqile intamo eside noma esifushane, cheekbones okusezingeni eliphezulu, ewumngcingo noma ebunzini ubanzi kakhulu nokunye. E. It kuvela ukuthi zingabantu amenable lapho ekhuzwa, futhi kwanele, isibonelo, ukukhetha uhlobo olufanele umuntu ngenxa ezilulazayo namathe.
Ngokwesibonelo, abesifazane ngekhala encane lingawuncoma "silingo" iphrofayli. Ukuze wenze lokhu, izinwele slicked ebusweni, wababeka Ponytail ngesikhathi umqhele, e eluka zakudala izinwele zakhe, wafaka wakhe ngesimo Kuvunguza.
Uma udinga ukuphazamisa nokunakwa ekhaleni, ke ungumuntu omuhle - kwekhanda nge ebunzini avaliwe. Ngokwesibonelo, ungakwazi eluka plait-esiphongweni kolunye uhlangothi ubuso, njengoba esithombeni.
izindlebe ophumile Ngeke neze abesifazane umhlobiso, ngakho-ke kungcono ukufihla ngaphansi izinwele. Ngenxa yalesi simo, isixazululo esiphelele - eluka zakudala kwamagoda ezimbili abehlela esifubeni sakhe. Futhi ukuze ungeze ivolumu kungenziwa ngikhishwa ngamunye wabo ahlinzeke okhethiwe.
Njengoba zezinwele for square ubuso uhlobo, uma intombazane yintamo mncane, inganikeza inguqulo quin we ezilulazayo namathe. Kumele siqale ukuba sifake kusukela indlebe omunye komunye phezu kwekhanda, unezela imicu ehla evela phezulu.
kwekhanda Universal eyofanelana zonke
Wonke umuntu uyazi ibinzana "phakade ophilayo zakudala." Ngakho, kwekhanda yendabuko - eluka eside, okuyinto eRussia ayehlaselwa ezinsukwini zobuqaba - kuwumgomo jikelele. Ngeke asondele kunoma intombazane nezinwele ngezansi emahlombe. I emisha kuphela - ukusetshenziswa isitayela yesimanje kanye curling - ukunikeza umthamo izinwele. Ngaphezu kwalokho, uma plait bendabuko aluka ku imicu emithathu kunalokho Friend namuhla curls kancane yakhishwa ngaphandle.
Njengoba ubona, kufanele kunikwa ematfuba lamanyenti ulungise ukubukeka kwabo, ukukhetha uhlobo olufanele umuntu ngenxa namathe, nokukusiza nge lezi zithombe kungasebenza abalungisa izinwele-ochwepheshe.
Idlalwa kanjani roulette e yekhasino
Indlela ukukhetha ifenisha?
Keanu Reeves: biography. Uhlu lwamafilimu amahle kakhulu ngo-Keanu Reeves
American ifilimu umqondisi Rodzher Korman: Biography, Filmography futhi amaqiniso athakazelisayo